The Anti-Malware Hwokutsvaga Kubva kuSemalt
Vanokwidza uye vanopikisa vave vachitora mabhizimusi eB2B neB2C pasi pezinga re 10% pagore. Maererano nePros, vatengesi vatora nzira dzavo dzekuparidzira kune vashandisi vepa webhusaiti uye zvigaro zvepabonde munzvimbo yakakwirira pane iyo ikozvino vari kushandisa mari yekutsvaga mari uye spam emails kuti vasvike kune vashandisi vekombiyuta.
Ryan Johnson, Mutungamiri Mukuru Wekutsvaga Semalt , anopa ruzivo munzira dzakachengeteka dzokudzivirira hurongwa hwako kubva pakurwisa - application server hosting service in portland.
Kuve wakatarisa paunenge uchishandisa inhare yevanhu uye kana kukanda mafaira kubva kune registry isingazivikanwi zvakakosha. Makambani mazhinji nemasangano akadzingwa pasi nekuda kwevashandi pakutsvaga mifananidzo nemapurogiramu kubva kune yehusaiti webhusaiti. Mavhiki mashomanana adarika, vatengesi vakasarudza kushandura hupenyu hwevashandura mapurisa evanotumira nekuvatumira emaimiriya ainge akaita seamamerica akakodzera. Mukufamba kwenguva, vatambudzi vakakwanisa kutora ruzivo rwemunhu uye rwemari kubva kuvashandisi kuburikidza nekudzorerazve kune mawebsite ane utsinye.
Kuchengetedza software yako nekuchengetedzwa kwezvirongwa zvinoshandiswa paunenge uchishandisa internet ndeimwe yezvikonzero zvinodzivisa kuedza kubva kune vanotengesa nevanopikisa kuti vasvike kunze. Funga kusafuratira maimeri uye mharidzo dzinyengeri dzakatumirwa kubva kune imwe nzvimbo isingazivikanwi. Kuongorora kubvumirwa kwewebsite kunogara kuchikurudzirwa kuchengetedza kero yako yakachengeteka.
Zvinonyadzisa sei kugadzirisa kuwana data kubva PC yako?
Vanonyadzisa vanotora mukana wevasingazivi vashandisi kuti vawane kukwana kwakakwana kwevanhoroondo dzavo. Kakawanda inoshandiswa maitiro nemaitiro anokonzera kutapudza PC yako inosanganisira:
Phishing ndechimwe chezvinyorwa zvakashandiswa kushandisa vashandisi.Haders vanotumira zvinyorwa zvinowanikwa neTransfer virus nemamwe malware anokurudzira kuti ugadzire maakaunti ako. iyo inodzora nhoroondo yako yekufambisa uye mamwe mabasa.Kushure kwokuwana ruzivo rwemari yako yehupfumi nemashoko evanhu, vatengesi vanoshandisa ruzivo muupambi uye masimba ekunyengera.
Nhamba dzakawanda dzevhidhiyo nhepfenyuro dzave dziri kunyunyuta nezvekubatwa mushure mekunyanya kubatana kwakatumirwa neshamwari dzavo. Vatengesi vanga vari kushandisa mavhidhiyo ekutora malware neTV virus iyo inopinda yakaiswa pakombiyuta yako mushure mekunge ichinyatsobatana.
Nzira yekudzivirira sei malware kuedza pa PC yako
Antivirus ndiro chinhu chinokosha pakasvika pakachengetedzwa kweInternet. Antivirus inoona nzvimbo uye dzinosangana zvinogona kukuvadza PC yako mushure mekunge uzvichengeta. Kuti urege kutorwa pasi neTransfer virus uye zvinotyisa zvinoshandiswa, isa uye uchengetedze anti-malware yako kusvika zvino.
Kushandiswa kwemazuva ose ejw.org
Nhoroondo yekombiyuta ine zvisarudzo zvevatungamiri isingakwanisi kugadziriswa nechekuita. Paunenge uchiisa software pane account yako, nguva dzose shandisa nzira yekugadzirisa yekuchengetedza kuti ive yakachengeteka.
Usambofa waisa purogiramu iwe unopokana nezvakarurama
Kuongorora kubvumirana kwepurogiramu isati yaiisa inogara ichikurudzirwa. Dzivisa kuisa kana kuvhara 'hongu' kusingazivikanwe software nemapurogiramu.
Firewall inonyanya kukosha kana iri kuuya kune webhusaiti uye nekuchengetedzwa kwepaIndaneti. Makombiyuta anoumbwa nemoto inbuilt firewall kuvhiringidza maitiro ekuedza kuuraya PC yako. Chiedza chekudzivirira moto chinoita kuti vanyevere vashandisi vemakombiyuta kana chirwere chinotapukirwa nehutachiona kana hutachiwana chinowanikwa pakombiyuta. Iva nemushandirapamwe unoshanda kuburikidza nekudzivisa kubatanidza pazvibatanidza nekubatanidza, kunyange kana zvibatanidzwa zvichiita sekutumwa neshamwari yako yepamusoro.